I-Mugul Mountain Retreat - I-Airbnb
I-Mugul Mountain Retreat
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguLee
Lala phantsi kwentaba. Yiva amandla omoya eNtaba yeMugul, indawo engcwele yeMveli. Vuka uye kumbono omangalisayo wale ndawo ingcwele yeMveli. Amagumbi amabini okulala aphantse agqitywa anebhedi enkulukazi kwindawo nganye. Iikharavani kunye neenkampu zamkelekile. Qhagamshelana nathi malunga namaxabiso.
Ibekwe kwisiseko seNtaba yeMugul, iyure enye ngemoto emazantsi eGladstone eQueensland, eOstreliya indawo yethu yeehektare ezingama-300 ibonelela ngamava awodwa.
Intaba yaseMugul yindawo engcwele yeMveli kunye nepaki yesizwe.
Hlala ubusuku bonke kwikhaya eliphantse lagqitywa, kwikhaya eliphefumlelweyo laseBalinese, okanye ungamisa inkampu kwipropathi okanye uze nekharavani yakho. Iindawo ezisisiseko ezingenamandla ziyafumaneka. Qhagamshelana nathi malunga namaxabiso. Amahashe nabanini bawo bamkelekile.
Ngenye imini iindibano zocweyo malunga ne-bush tucker kunye namayeza asehlathini zinokucwangciswa. Iindibano zocweyo zinika abathathi-nxaxheba ithuba lokufunda malunga neentyatyambo zomthonyama - into esetyenziswe ngabantu bomthonyama kulo mmandla, i-Goreng Goreng, ngeenjongo zonyango kunye nokutya. Iindibano zocweyo ziquka i-bush tucker isidlo sasemini esiphekwe ngendlela yesintu.
4.92 · Izimvo eziyi-159
Abahambi banokuqhuba ukuya eKrombit Tops National Park eBoyne Valley kwaye batyelele inqwelomoya yeMfazwe yesibini yeHlabathi ephantsi 'iBetsy'.
I-Agnes Water/ 1770 yimizuzu engama-40 kuphela yokuqhuba.
Sinokuncedisa ngemibono yohambo lwemini kunye noko kufumaneka eGladstone, Agnes Water/ 1770, Boyne Valley and Boyne Island / Tannum Sands.